Usethandazela ukuthi kungamphindi ukulimala oweChiefs - Impempe
Usethandazela ukuthi kungamphindi ukulimala oweChiefs
April 20, 2021 Impempe.com
Ubuyelwe ukuzethemba uDumisani Zuma ngemuva kokubuya ekulimaleni qede wenza omuhle umsebenzi lo elekelela iKaizer Chiefs ukuwelela esigabeni somkhumulajezi kwiCaf Champions League ngeviki elidlule.
UZuma ungomunye wabadlali abahle futhi abathandwayo ngabalandeli beChiefs kodwa uhlushwa wukulimala okumenza adlala isikhashana, aphinde ahlale engadlali bese kuba nzima ukuzibekisela indawo eqenjini eliqala imidlalo.
Nokho kulokhu unethemba lokuthi kuzoke kumxolele ukulimala, futhi usebheke ukuqhubeka la ayegcine khona bebambana neHoroya ngo 2-2 ekuhambeni.
“Kusahamba kahle konke okwamanje, ukulimala kusangixolele. Osekuyinkinga nje manje wukuthi angikakabi fithi ngokwanele kodwa ngoba sengibuyele ngijima neqembu, yonke into izobuyela esimweni esilungile,” kusho uZuma ngoLwesibili.
UZuma wagila izimanga engena Amakhosi eselandela ngemuva ngo 1-0, waba nesandla egolini lokulinganisa. Waphinde wakhela uKhama Billiat ithuba alisebenzisa ukwenza kube ngu 2-2, kade sebephinde bangenelwa elinye igoli.
“Ukuzethemba kwami kubuyile ngemuva kwalowa mdlalo engikwazile ukuthi ngisize kuwo iqembu likwazi ukungena esigabeni somkhumulajezi kwiChampions League,” kusho yena.
Amakhosi abuyela kwiDStv Premiership ngoLwesithathu la ezobhekana khona neCape Town City eFNB Stadium ngo 5 ntambama. Uyavuma okaMsholozi ukuthi kuzomele bawakhiphe wonke amangwevu ukuze bathole amaphuzu aphelele.
“Kuzoba wumdlalo onzima kakhulu ngoba uma ubheka imidlalo yabo edlule, benza kahle futhi ngisho nangesikhathi sibashaya eKapa basithwalisa kanzima, kodwa ngiyathemba ukuthi ngokubambisana siyiqembu sizokwazi ukuwina.
“Amalungiselelo wethu ahamba kahle kakhulu, futhi nathi singabadlali siyasiqonda isimo esikuso, ngakho yonke imidlalo esiyidlalayo sekuzomele siyiwine kumnyama kubomvu.”
Previous Previous post: Uyazigqaja ngomsebenzi wakhe unozinti weTTM
Next Next post: Kusinda kwehlela kwiChippa egaxele odakeni lwezembe